कसरी सम्भव भयो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको अन्तिम टुंगो ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
कसरी सम्भव भयो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको अन्तिम टुंगो ?
काठमाडौँ, २ फागुन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको अन्तिम खाका तयार भएको छ । दुई पार्टीबीच उच्च तहमा भएको छलफलमा नयाँ पार्टीमा दुई अध्यक्ष राख्ने सहमति भएको छ । दुई अध्यक्षमध्ये एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सेरेमोनियल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेछन् ।
बुधवार दिनभर केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच दुई÷तीन चरणमा एक्लाएक्लै र आआफ्ना पार्टीभित्र छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो । पटकपटकका यी बैठकबाट यो खाकाको टुंगो लगाइएको हो । दुबै पार्टीको बैठक दिनभर ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित एक ठेकेदारको घरमा भएको थियो ।
यसरी मिल्यो कुरा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि अनेकौंपटक पार्टी एकताको प्रयासमा दुई अध्यक्ष र पार्टी एकता संयोजन समितिबीच बैठक सम्पन्न भएका थिए । अन्तमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको हैसियत समान हुने भनेपछि कुरा मिलेको बताइएको छ । अन्तिममा मिलेको सहमति अनुसार अब केपी ओली र प्रचण्ड दुबै जना पार्टीको अध्यक्ष हुनेछन् भने दुई अध्यक्षमध्ये ओली सेरेमोनियल अध्यक्ष हुनेछन् । यता, प्रचण्ड भने कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछन् । ओली प्रधानमन्त्री हुने भएको हुनाले उनी सेरेमोनियल अध्यक्ष हुन सहमत भएका हुन् । नयाँ पार्टीमा दुई अध्यक्ष बाहेक अरु कुनै पदाधिकारी पद नबनाउने कुरामा पनि सहमति भएको छ ।
राष्ट्रपति पनि एमालेकै भागमा, माकेलाई उपराष्ट्रपति र सभामुख
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै पद एमालेको भागमा परेको छ । एमालेबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने राष्ट्रपतिमा बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, विद्यादेवी भण्डारी हुनसक्ने बताइएको छ । माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति र सभामुख बनाउनेछ । उपसभामुख भने एमालेकै भागमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो
त्यस्तै, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि उनी साढे दुई वर्षमात्र प्रधानमन्त्री हुनेछन् । दुई पार्टीले प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउने सहमति गरेका छन् । साढे दुई वर्षपछि ओलीले सरकार छोडेर प्रचण्डलाई सुम्पनेछन् । त्यसपछि प्रचण्ड सेरेमोनियल अध्यक्षमा परिणत हुनेछन् भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा ओली फर्कने छन् ।
प्रचण्डले माओवाद पनि छोडे
जनयुद्ध छाडेर संसदीय प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्रले माओवाद पनि त्याग्ने भएको छ । अब दुई पार्टीको एकताका क्रममा प्रचण्ड अर्थात माओवादी केन्द्रले माओवाद पनि छोड्ने भएको छ । नयाँ सहमतिअनुसार अब पार्टीको राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद र लेनिनवाद मात्र रहनेछ । त्यसैगरी पार्टीको कार्यदिशा समाजवादउन्मुख हुने भनिएको छ । त्यसकै आधारमा कार्यदिशा निर्माण गरिने सहमति भएको छ ।
यता, संगठनात्मक संरचना बनाउन चाहिँ कार्यदल बनाइने भएको छ । एउटा कार्यदलले कार्यदिशा निर्माण गर्नेछ भने अर्को कार्यदलले संगठनात्मक संरचनाको खाका तयार गर्नेछ ।
नाम : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
एकतापछि पार्टीको नाम “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी” राख्ने सहमति भएको छ । तर, यही नाम नेत्रविक्रम चन्द “विप्लव”ले नेतृत्व गरेको पार्टी पहिलेदेखि नै क्रियाशील छ । नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समिति ९९ जनाभन्दा बढी नबनाउने सहमति भएको छ भने पोलिटब्यूरो ३३ र स्थायी कमिटी ११ सदस्यीय हुने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सहमति जुटाउन यस्तो गरियो
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको पार्टी एकताको प्रयासस्वरुप आज चरण÷चरणमा वार्ता भएको थियो । प्रारम्भमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच बिहान करिब ११ बजे एक्लाएक्लै वार्ता भएको थियो । आज दिनभरको वार्ता ललितपुरस्थित एक उद्योगीको घरमा भएको थियो ।
दुबै नेताले पार्टी एकताका आधारभूत मोडल र सरकार गठनबारे खाका तयार पारेका थिए । सो खाका बोकेर दुई नेताहरु आआफ्ना पार्टीको आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । ओलीले आकस्मिक रुपमा सोही निवासमा पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाएर ब्रिफिङ गरे भने प्रचण्डले आफ्नो निवास खुमलटारमा पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थिए । दुबै नेता पुनः ३ बजेतिर एक्लाएक्लै वार्तामा बसेका थिए भने सो खाकामा सहमति कायम गरी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसालेका थिए । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले सोही खाकाबारे बैठकमा छलफल गरिरहेको छ । यही बैठकले एकताको अन्तिम खाका तयार पार्ने बताइएको छ ।